Apple အတွက် Sky is The Limit လေလား? MacBook Air Vs Surface Laptop 2
1 Nov 2018 . 1:56 PM
MacBook Air လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ စာအိတ်ထဲထည့်သွားပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်သွားနိုင်တဲ့ Apple Mac ဆိုတာ ချက်ချင်းမျက်မှန်းတန်းမိကျမှာပါ။ စင်မြင့်ပေါ်ရောက်လာတာ ၁၀ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် အခုချိန်ထိ Apple စံနှုန်းကို Windows Laptop တွေ မလိုက်နိုင်ကျသေးပါဘူး။
ဒီလိုတဖက်သတ်ပြောလိုက်လို့ Apple Crazy ဖြစ်မသွားပေမယ့် 11.6″ MacBook Air မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ပြီး Windows တွေမှာ Ultrabook လို တကယ့် Premium Laptop တွေ အစဉ်လိုက် ထွက်လာတယ်။ တိုက်ရိုက်ခိုးချတယ်လို့ မစွပ်စွဲရပေမယ့် Windows ဥက္ကဌ Microsoft ကိုယ်တိုင်တောင် Surface ၊ Surface ဆိုပြီး MacBook Air Class ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံးအတွက် အရည်သွေးမြင့် Laptop တွေကို ကိုယ်ပိုင် စီးရီးနဲ့ထုတ်လာတယ်။
ပြီးတော့ Windows Laptop တွေမှာ Powerful Specs နဲ့ Display သုံးလာကြတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ MacBook သုံးရတာလောက် Feel မရှိဘူးဆိုတာ လက်ခံရမှာပါ။ Touch စနစ်မပါတာနဲ့ Game မကစားနိုင်တာကလွဲလို့ပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Mac တွေက အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Portable ဖြစ်ဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ Software နည်းပညာထောက်ပံ့ဖို့ အသားပေးထားတာဆိုတော့ နားလည်ပေးရမှာပေါ့နော်။
ကယ်အခု MacBook Air 2018 နဲ့ Surface Laptop2မိတ်ဆက်ထားတယ်၊ ရောင်းဈေးက $1,199 နဲ့ $999 ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတယ်။ Laptop ၂ မျိုးလုံးရဲ့ Target က ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ တေးဂီတနားဆင်ဖို့အတွက်။ ဒီလိုဆိုတော့ ဘယ်သူက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ?
Display ပိုင်းအရင်စပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ MacBook Air ကို အရှုံးပေးရတော့မှာပါ။ အရင်က ဝဲဆွဲပြီး မှုန်ဝါးဝါး 1440×900 Display ကိုစွန့်ခွာပြီး အဲ့ဒီရဲ့ ၂ ဆ 2560×1600 Resolution ကိုမှ IPS (In-plane Switch) Panel နဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ Screen Size က 13.3″ ပဲဆိုတော့ Pro တွေနဲ့ တန်းတူဖြစ်သွားပြီလေ၊ 16:10 Aspect Ratio ၊ 227 ppi (Pixel per inch) ဖြစ်သွားပြီ။
With Gorgeous Display
Surface Laptop2ကိုလည်း လျှော့တွက်မရဘူးဗျ၊ ဒီကောင်ကလည်း 13.5″ Display ကိုမှ 2256×1504 Resolution နဲ့၊ Air နဲ့ယှဉ်ရင် 0.2″ ပိုကြီးသွားလို့ 201 ppi ပဲရှိတယ်။ IPS Panel ဖြစ်နေလို့ Display Quality ချင်း သိပ်မကွာဘူးလို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်၊ Full HD သာဆိုရင်တော့ Air ကိုကြည့်ပြီးတခြား Display သွားကြည့်လို့ အစဉ်ပြေမယ်မထင်။ Display Panel ၂ မျိုးလုံး QHD Resolution ထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုပေမယ့် HDR မရဘူး၊ Air မှာ TrueTone Display ပါမလာဘူး။
Hardware ပိုင်းချင်းထပ်ယှဉ်ရမယ်ဆိုရင် Air က ဈေးပိုကြီးတယ်၊ ၂ မျိုးလုံး 8th Intel Core i5 Processor ၊ 8GB RAM ၊ 128GB SSD ကို Basic Configuration အနေနဲ့သုံးပေးထားတာမလို့ $999 တန် Surface Laptop2က ဈေးပိုချိုတယ်၊ အထူးသဖြင့် Mac သုံးဖို့မလိုဘူး၊ Windows သုံးရတာနှစ်ခြိုက်သူ၊ Free Apps တွေနဲ့ DOTA2လို ဂိမ်းမျိုးပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကစားချင်သူတွေက Air ထက် Surface ကို ရွေးမယ်ထင်တာပဲ။
ဒါပေမယ့်လို့ Security ပိုင်းနဲ့ OS ပိုင်းမှာ Air ကိုယှဉ်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူး၊ Apple T2 Chip က Hacker တွေ Mic ကတဆင့် ခိုးနားထောင်မရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်၊ TouchID စနစ်လည်း ထောက်ပံ့ထားသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ $200 ပိုသုံးလိုက်တာက ဒီအားသာချက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ရလာမယ်။ သမာရိုးကျ ကွန်ပျူတာသုံးတာထက် ပိုပြည့်စုံတယ်လို့ ခံစားရမှာကတော့ ကျိန်းသေပါ။
With2Type-C Ports on MacBook Air
Keyboard ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပေမယ့်လို့ အခုချိန်ထိ USB C မပါသေးတဲ့ Surface Laptop က ခေတ်နောက်ကျနေပြီလို့ ဆိုရပါမယ်။ Air မှာ Type-C ၊ Type-A နဲ့ Thunderbolt3ကိုပါ ထောက်ပံ့ထားတဲ့ USB-C Port ၂ ခုအပြင် 3.5mm Headphone Port ပါပါသေးလို့ Media ပိုင်းအတွက် Portable ဆန်သေးတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
Thinner ၊ Lighter and yet still Powerful enough
ဒီ ဆောင်းပါးလေးကို အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် MacBook Air 2018 မော်ဒယ်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးချင်သူ၊ Display အရည်သွေးလည်းကောင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုမှလိုချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပြီလို့ ပြောရတော့မှာပါ။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ ၁၀ နှစ်ကြီးများတောင် အချိန်ဆွဲထားကိုတော့ မကျေနပ်မိပေမယ့် Apple Fans တွေလိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝသွားခဲ့ပြီ၊ Ultrabook လောကမှာ Dell XPS တို့ရှိပေမယ့် OS ပိုင်းရော Security ပိုင်းမှာ ယှဉ်မရသေးတာ လက်ခံရမှာပါ။ ဂိမ်းကစားတာမျိုး Mac နဲ့ မကိုက်ဘူး၊ MacOS က Touch Support မပေးသေးဘူးဆိုတော့ ဈေးလည်းချို စွယ်စုံရ Windows Laptop တွေကို Apple မယှဉ်နိုင်သေးတာကလည်း တရားသေလိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ဝယ်ယူတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ်။
Apple အတှကျ Sky is The Limit လလေား? MacBook Air Vs Surface Laptop 2
MacBook Air လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ စာအိတျထဲထညျ့သှားပွီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယျသှားနိုငျတဲ့ Apple Mac ဆိုတာ ခကျြခငျြးမကျြမှနျးတနျးမိကမြှာပါ။ စငျမွငျ့ပျေါရောကျလာတာ ၁၀ နှဈပွညျ့သှားခဲ့ပွီဆိုပမေယျ့ အခုခြိနျထိ Apple စံနှုနျးကို Windows Laptop တှေ မလိုကျနိုငျကသြေးပါဘူး။
ဒီလိုတဖကျသတျပွောလိုကျလို့ Apple Crazy ဖွဈမသှားပမေယျ့ 11.6″ MacBook Air မိတျဆကျပွီးနောကျပွီး Windows တှမှော Ultrabook လို တကယျ့ Premium Laptop တှေ အစဉျလိုကျ ထှကျလာတယျ။ တိုကျရိုကျခိုးခတြယျလို့ မစှပျစှဲရပမေယျ့ Windows ဥက်ကဌ Microsoft ကိုယျတိုငျတောငျ Surface ၊ Surface ဆိုပွီး MacBook Air Class ကြောငျးသုံး၊ ရုံးသုံးအတှကျ အရညျသှေးမွငျ့ Laptop တှကေို ကိုယျပိုငျ စီးရီးနဲ့ထုတျလာတယျ။
ပွီးတော့ Windows Laptop တှမှော Powerful Specs နဲ့ Display သုံးလာကွတယျဆိုပမေယျ့လို့ MacBook သုံးရတာလောကျ Feel မရှိဘူးဆိုတာ လကျခံရမှာပါ။ Touch စနဈမပါတာနဲ့ Game မကစားနိုငျတာကလှဲလို့ပေါ့နျော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Mac တှကေ အလုပျလုပျဖို့အတှကျ Portable ဖွဈဖို့၊ လိုအပျတဲ့ Software နညျးပညာထောကျပံ့ဖို့ အသားပေးထားတာဆိုတော့ နားလညျပေးရမှာပေါ့နျော။
ကယျအခု MacBook Air 2018 နဲ့ Surface Laptop2မိတျဆကျထားတယျ၊ ရောငျးဈေးက $1,199 နဲ့ $999 ဆိုပွီး သတျမှတျထားတယျ။ Laptop ၂ မြိုးလုံးရဲ့ Target က ရုံးသုံး၊ ကြောငျးသုံးနဲ့ ရုပျရှငျကွညျ့၊ တေးဂီတနားဆငျဖို့အတှကျ။ ဒီလိုဆိုတော့ ဘယျသူက အကောငျးဆုံးရှေးခယျြမှုကို ပိုငျဆိုငျထားလဲ?
Display ပိုငျးအရငျစပွောရမယျဆိုရငျတော့ MacBook Air ကို အရှုံးပေးရတော့မှာပါ။ အရငျက ဝဲဆှဲပွီး မှုနျဝါးဝါး 1440×900 Display ကိုစှနျ့ခှာပွီး အဲ့ဒီရဲ့ ၂ ဆ 2560×1600 Resolution ကိုမှ IPS (In-plane Switch) Panel နဲ့ဖွဈသှားပွီ။ Screen Size က 13.3″ ပဲဆိုတော့ Pro တှနေဲ့ တနျးတူဖွဈသှားပွီလေ၊ 16:10 Aspect Ratio ၊ 227 ppi (Pixel per inch) ဖွဈသှားပွီ။
Surface Laptop2ကိုလညျး လြှော့တှကျမရဘူးဗြ၊ ဒီကောငျကလညျး 13.5″ Display ကိုမှ 2256×1504 Resolution နဲ့၊ Air နဲ့ယှဉျရငျ 0.2″ ပိုကွီးသှားလို့ 201 ppi ပဲရှိတယျ။ IPS Panel ဖွဈနလေို့ Display Quality ခငျြး သိပျမကှာဘူးလို့ဆိုရမယျပေါ့နျော၊ Full HD သာဆိုရငျတော့ Air ကိုကွညျ့ပွီးတခွား Display သှားကွညျ့လို့ အစဉျပွမေယျမထငျ။ Display Panel ၂ မြိုးလုံး QHD Resolution ထောကျပံ့ထားတယျဆိုပမေယျ့ HDR မရဘူး၊ Air မှာ TrueTone Display ပါမလာဘူး။
Hardware ပိုငျးခငျြးထပျယှဉျရမယျဆိုရငျ Air က ဈေးပိုကွီးတယျ၊ ၂ မြိုးလုံး 8th Intel Core i5 Processor ၊ 8GB RAM ၊ 128GB SSD ကို Basic Configuration အနနေဲ့သုံးပေးထားတာမလို့ $999 တနျ Surface Laptop2က ဈေးပိုခြိုတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ Mac သုံးဖို့မလိုဘူး၊ Windows သုံးရတာနှဈခွိုကျသူ၊ Free Apps တှနေဲ့ DOTA2လို ဂိမျးမြိုးပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကစားခငျြသူတှကေ Air ထကျ Surface ကို ရှေးမယျထငျတာပဲ။
ဒါပမေယျ့လို့ Security ပိုငျးနဲ့ OS ပိုငျးမှာ Air ကိုယှဉျလို့ရမယျမထငျပါဘူး၊ Apple T2 Chip က Hacker တှေ Mic ကတဆငျ့ ခိုးနားထောငျမရအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျတယျ၊ TouchID စနဈလညျး ထောကျပံ့ထားသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့မလို့ $200 ပိုသုံးလိုကျတာက ဒီအားသာခကျြတှေ ပိုငျဆိုငျရလာမယျ။ သမာရိုးကြ ကှနျပြူတာသုံးတာထကျ ပိုပွညျ့စုံတယျလို့ ခံစားရမှာကတော့ ကြိနျးသပေါ။
Keyboard ပိုငျးနဲ့ပတျသကျလို့ ထှထှေထေူးထူးပွောစရာမရှိပမေယျ့လို့ အခုခြိနျထိ USB C မပါသေးတဲ့ Surface Laptop က ခတျေနောကျကနြပွေီလို့ ဆိုရပါမယျ။ Air မှာ Type-C ၊ Type-A နဲ့ Thunderbolt3ကိုပါ ထောကျပံ့ထားတဲ့ USB-C Port ၂ ခုအပွငျ 3.5mm Headphone Port ပါပါသေးလို့ Media ပိုငျးအတှကျ Portable ဆနျသေးတယျလို့ ဆိုရပါမယျ။
ဒီ ဆောငျးပါးလေးကို အနှဈခြုပျရမယျဆိုရငျ MacBook Air 2018 မျောဒယျက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးခငျြသူ၊ Display အရညျသှေးလညျးကောငျး၊ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ဒီဇိုငျးကိုမှလိုခငျြသူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးရှေးခယျြမှုဖွဈလာပွီလို့ ပွောရတော့မှာပါ။ ဒီလိုဖွဈလာဖို့ ၁၀ နှဈကွီးမြားတောငျ အခြိနျဆှဲထားကိုတော့ မကနြေပျမိပမေယျ့ Apple Fans တှလေိုအငျဆန်ဒပွညျ့ဝသှားခဲ့ပွီ၊ Ultrabook လောကမှာ Dell XPS တို့ရှိပမေယျ့ OS ပိုငျးရော Security ပိုငျးမှာ ယှဉျမရသေးတာ လကျခံရမှာပါ။ ဂိမျးကစားတာမြိုး Mac နဲ့ မကိုကျဘူး၊ MacOS က Touch Support မပေးသေးဘူးဆိုတော့ ဈေးလညျးခြို စှယျစုံရ Windows Laptop တှကေို Apple မယှဉျနိုငျသေးတာကလညျး တရားသလေိုမြိုးဖွဈနတောဆိုတော့ ကိုယျ့လိုအပျခကျြအတိုငျး သခြောစဉျးစားပွီးမှ ဝယျယူတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျလို့ပွောရငျး နိဂုံးခြုပျလိုကျရပါတယျ။